အရှေ့တောင်အာရှမှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နဲ့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ဖို့ Grab နဲ့ ပူးပေါင်းလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Samsung! – AsiaApps
February 13, 2018 February 13, 2018 WilliamFeaturesNo Comment on အရှေ့တောင်အာရှမှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နဲ့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ဖို့ Grab နဲ့ ပူးပေါင်းလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Samsung!
Samsung ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း Mobile မာကတ်မှာသာမက လျှပ်စစ်ပစ္စည်းမာကတ်မှာပါ ထိပ်တန်းကရပ်တည်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူ Grab ဟာလည်းအရှေ့တောင်အာရှမှာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ Mobile ငွေပေးချေမှုစနစ်မှာ ထိပ်တန်းအဆင့်ကရပ်တည်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လို ထိပ်တန်းအဆင့် ရောက်ရှိနေတဲ့ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုတို့ဟာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ဖို့ နှစ်ရှည် MOU တစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ပူးပေါင်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုတော့ ဖေဖော်ဝါရီ လ ၂ ရက်နေ့မှာ Samsung Electronic ကကြေညာခဲ့တာပါ။
Samsung အနေ Grab နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ Samsung ထုတ်ကုန်သုံးစွဲသူတွေကို ပိုပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုပေးနိုင်အောင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာတွေအသုံးပြုပြီး လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Grab အနေနဲ့တော့ Samsung နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ သူရဲ့ ယာဉ်မောင်းသူတွေနဲ့ စီးနင်းမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပိုမိုအဆင်ပြေအောင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနဲ့ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်လို့ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုက ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ လို့ပဲဆိုရမှာပါ။
အပေါ်မှာဖော်ပြထားတာကတော့ Grab ရဲ့ CEO, Co-founder ဖြစ်သူ Anthony Tan နဲ့ Samsung Electronics ရဲ့ President, CEO ဖြစ်သူ Sangchul Lee တို့ရဲ့ MOU လက်မှတ်ရေးထိုးမှုအပေါ်အမြင်၊ ဒစ်ဂျစ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရတဲ့ အကြောင်း အစရှိတာတွေကို ပြောကြားချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Android, Corporation, Grab, Samsung